မက်ဒရစ်ရှိ Playa de Parla: စျေးနှုန်းများ၊ ထိုနေရာကိုမည်သို့ရောက်ရှိနိုင်မည်နှင့်အချိန်ဇယား | ခရီးသွားသတင်း
မက်ဒရစ်ရှိ Parla ကမ်းခြေ
မော်နီကာဆန် | | ယေဘုယျ
စပိန်၏မြို့တော်၊ မက်ဒရစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့များစွာပြုလုပ်နိုင်ပြီး Prado ပြတိုက်သို့မဟုတ် Parque del Oeste ကဲ့သို့အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနေရာများသို့သွားရောက်နိုင်သည်။ နွေရာသီမှာတောင် ဆားငန်တဲ့ရေကိုသောက်နိုင်တယ်ငါတို့မိသားစုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများနှင့်ပျော်စရာကောင်းနေစဉ်။
ဤနေရာသည်ကမ်းခြေမဟုတ်သော်လည်းကမ်းခြေမဟုတ်သော်လည်း၎င်းကိုလူသိများသည် ပါရာသဲသောင်ပြင်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်သဲဖြင့်ဝန်းရံထားသောမြက်များနှင့်ဝန်းရံထားသောရေငန်ရေကန်များအကြောင်းကိုသင့်အားအနားယူရန်နှင့်ကမ်းခြေကိုရှာဖွေရန်လေယာဉ်ကိုမယူစရာမလိုဘဲအပူဆုံးနေ့ရက်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ Parla ကမ်းခြေသည်မက်ဒရစ်တောင်ဘက် ၁၆.၄ ကီလိုမီတာအကွာ Parla တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းကိုဗိသုကာပညာရှင် Manuel Canalda မှဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးအားကစားနှင့်အပန်းဖြေမှုအခြေခံအဆောက်အ ဦး ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ အားလုံးပရိသတ်တွေမှလက်လှမ်းမသန်စွမ်းသူများအတွက်လည်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ရေကန်ပေါင်းများစွာကိုတွေ့ရလိမ့်မည် - တဖြည်းဖြည်းချင်းအနက် ၁.၆၀ မီတာရှိသောလူကြီးများအတွက်တစ်ခု၊ ကလေးများအတွက်နောက်တစ်ခုနှင့် ၂၅ မီတာဆလိုက်နှင့်အပန်းဖြေရေကူးကန်ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းသူတို့သိမ်းပိုက် နီးပါး 4.000 စတုရန်းမီတာ, မမေ့နိုင်သောနွေရာသီဖြုန်းဖို့လုံလောက်တဲ့ထက်မျက်နှာပြင်။
ထို့အပြင်၎င်းတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရေကန်၏အစွန်းဘေးတွင် ၈၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသောသဲသောင်ပြင်အနှံ့အပြားရှိသည်။ ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်ရင်တစ်ခုခုစားချင်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါ၊ သင်က၎င်း၏ပျော်ပွဲစားဒေသနှစ်ခုထဲကတစ်ခုသို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်ကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ကလေးများပင်ကစားကွင်းတွင်ကစားစရာအချိန်များစွာရှိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်၎င်း၏ ၂၂၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသောမြက်ခင်းပေါ်တွင်ကစားနိုင်သည်။
1 Playa de Parla ကိုငါဘာသွားဖို့လိုအပ်?
2 Playa de Parla မှာတစ်ရက်နေဖို့ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။
3 Playa de Parla ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။
4 Playa de Parla ၏နာရီများမှာအဘယ်နည်း။
Playa de Parla ကိုငါဘာသွားဖို့လိုအပ်?
ပါရာကမ်းခြေကိုသွားဖို့သင်သာလိုအပ်သည် ငါတကယ်ပျော်ချင်တယ် ကမ်းခြေပေါ်တွင် - အတုဖြစ်လျှင်ပင် - က ရေကူးဝတ်စုံ နှင့် မျက်နှာသုတ်ပဝါ။ နေရောင်ခြည်သုံးတာကိုမကြိုက်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ်ကြာရှည်စွာထိတွေ့ပြီးနောက်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်တာကိုပိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းကိုထီး ၃၀၀ ထဲကတစ်ခန်းကိုငှားရမ်းနိုင်သည်။
Playa de Parla မှာတစ်ရက်နေဖို့ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။
ကလေးလက်မှတ် (၄ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အထိ) - ၄.၀၅ ယူရို
အရွယ်ရောက်ပြီးသူလက်မှတ် - ၇.၅၀ ယူရို
ကလေးများအတွက်ရေချိုးခန်းဘောက်ချာ ၁၀ ယူရို ၂၀.၅၅
၁၀ ရေချိုးခန်းပါသောဘောက်ချာ - ၅၁ ယူရို
မသန်စွမ်းသူများ - ယူရို ၁.၇၀
အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်လူများ - ယူရို ၁.၇၀
ပင်စင်စားများ: 4,05 ယူရို
အသက် ၄ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်ကြားကလေးများ - ယူရို ၆.၃၅
အရွယ်ရောက်သူ - ၁၂.၇၅ ယူရို
Playa de Parla ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။
သငျသညျအဲဒီမှာသွားချင်အခါတိုင်း Avenida de Américaကိုသွားသင့်တယ်, Alfredo di Stefano လယ်ပြင်၌။ ကြိုးဖုန်း 912 02 47 75 နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှာ 678 20 79 68 ဖြစ်သည်။
Playa de Parla ၏နာရီများမှာအဘယ်နည်း။
ဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်လုပ်ထားတဲ့ကမ်းခြေဟာတစ်နှစ်ပတ်လုံးပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိပါဘူး နွေရာသီလများအတွင်းသာဖွင့်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်, သူတို့သည်ဇွန်လကုန်မှာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သြဂုတ်လကုန်မှာပိတ်။ အချိန်ဇယားသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ဒီမယုံနိုင်စရာနေရာကိုမနက် ၁၀ နာရီမှည ၉ နာရီအထိမည်သည့်နေ့ရက်၌မဆိုသင်ခံစားနိုင်သည်၊ သင်၏မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် Playa de Parla ၌ကောင်းသောနေ့ရက်ကိုဖြုန်းပါ။
ပြီးဆုံးဖို့အတွက်နွေရာသီမှာ Parla မှာဘယ်လိုရာသီဥတုရှိသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ထက်၊ တစ်နေ့ (သို့မဟုတ်အတော်ကြာ) ၏ကမ်းခြေသို့မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်အခွင့်အလမ်းများရနိုင်သလဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ဘယ်ဟာထက်ပိုကောင်းသလဲ။ ကောင်းပြီ။
ပါလာ၏ရာသီဥတုမှာနွေးထွေး။ အေးသည်။ ဇူလိုင်လအတွင်းအပူချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိချိန်တွင်ပျမ်းမျှ ၂၄.၅ºC ကျော်ရှိသော်လည်း32ºCအထိရှိသည်။ မိုးရွာမည်ဟုသင်စိတ်ပူလျှင်သင်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။ 🙂 အပူဆုံးလသည်ခြောက်သွေ့ဆုံးဖြစ်ပြီးပျမ်းမျှ ၁၀ မီလီမီတာရှိသည်။ တကယ်တော့မိုးရွာတဲ့လကနိုဝင်ဘာဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာမင်းရဲ့အားလပ်ရက်ဟာပျက်စီးဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့အခုသင်သိသည်၊ သင်မက်ဒရစ်တွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ဖြစ်စေ၊ နှစ်၏ပူနွေးသောလများအတွင်းထိုတွင်ခရီးသွားရန်စီစဉ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ Playa de Parla ရှိရေကန်များထဲမှတစ်ခုသို့နှစ်မြှုပ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်မက်ဒရစ်မြို့၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းအပြင်မြို့တော်၌အလှည့်အပြောင်းဆုံးနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » မက်ဒရစ်ရှိ Parla ကမ်းခြေ
ရေကန်ထဲသို့ ၀ င်ရန်ယူရို ၃၀ ??? တောင်းပန်ပါရစေ၊ လုယက်မှုတစ်ခုလိုဖြစ်နေသည်။ …တစ်ပတ်လျှင်ယူရို ၃၀ … ..
အပြင်လူနှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်နေထိုင်သူများအကြားစျေးနှုန်းကွာခြားမှုသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ ငါတို့အားလုံးသည်မက်ဒရစ်မှဖြစ်ပြီး၊ ပိုမိုကြီးမားသော၊ လှပသောရေကန်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အဲဒီစျေးနှုန်းတွေကိုကျေပွန်တဲ့လူတွေမရှိလို့မကြာခင်မှာပဲပိတ်ထားလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကတကယ့်လိမ်လည်မှုပဲ။ ကမ်းခြေကိုသွားဖို့ဈေးချိုတယ်
မော်နီကာ Garcia က Alvarez ဟုသူကပြောသည်
စျေးကမတန်တဆ ထိုအခါနွေရာသီအတွက်အပူချိန်ပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူး, ကပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၎င်းသည်ကြားနေဆောင်းပါးနှင့်မတူပါ၊ ၎င်းသည်ကြော်ငြာနှင့်ပိုတူသည်။
Monica García Alvarez အားပြန်ပြောပါ
ငါ Parla မှာမနေထိုင်သောသူတို့အဘို့အစျေးနှုန်းမြင့်မားသည်, သူတို့ကလျှော့ချသင့်တယ်ငါသေချာပေါက်ငါငါ့မိသားစုနှင့်အတူသစ္စာရှိဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူကြီး ၄ ယောက်နှင့် ၆ နှစ်သမီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အမှန်တရားကစျေးကြီးလိမ့်မယ် စျေးနှုန်းလျှော့ချရမယ်၊ ပိုပြီးမျှတမယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါလာကိုသွားဖို့ကားကိုငါတို့ပြင်ပကလာတဲ့သူတွေကစပြီးသုံးကြလို့ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်တိုင်းပြည်ပြင်ပမှသူများအတွက်အလွန်စျေးမြင့်မားသောပုံရသည်။ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအလုပ်အကိုင်လိုအပ်သူများအတွက်အခြားစျေးနှုန်းတစ်ခုလည်းရှိသည်။ စည်ပင်သာယာရေကူးကန်များကစနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင်စျေးနှုန်းသည် ပုံမှန်စျေးနှုန်းချိုသာပါကတစ်ပတ်လျှင် ၂ ကြိမ် ၃ ကြိမ်ရှိလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့မနေ့ကခဲ့ကြသည်, 12.75 မှတ်ပုံတင်မဟုတ်, 7,50 မှတ်ပုံတင်။ ငါကလေးတွေကိုမမှတ်မိဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့သမီးလေးကအသက် ၃ နှစ်အောက်ငယ်တဲ့အတွက်ပိုက်ဆံမပေးဘူး။ ထီးမရှိသေးပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်စောစောသွားလျှင်သစ်ပင်များတွင်အရိပ်များစွာရှိသည်။
လေထုသည်အလွန်အေးဆေးတည်ငြိမ်သည်။ သူတို့စားသောက်ဆိုင်ဘေးမှာပျော်ပွဲစားစားပွဲareaရိယာရှိတယ်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရမင်းတို့ဟာမြက်ခင်းပေါ်မှာမစားနိုင်ဘူး၊ ငါတို့အားလုံးကရေခဲသေတ္တာတွေနဲ့အသားညှပ်ပေါင်မုန့်တွေနဲ့အတူရှိနေတယ်။ ၀ န်ထမ်းတွေကဘာမှမပြောကြဘူး၊
ငါထင်တာကစျေးကကြီးတယ်ထင်တယ်၊ အကယ်လို့ဈေးလျှော့လိုက်ရင်လူတွေနဲ့ပြည့်နေလိမ့်မယ်။ သူတို့လည်းအဲဒီမှာမရှိတော့ဘူး။ လက်မှတ်တစ်လုံးကိုယူရို ၂၀ နဲ့ထည့်လိုက်မယ်။
သင်၌မိသားစုမရှိခြင်းသို့မဟုတ်သင်ကချမ်းသာသူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေး ၂၀၀၊ ၃၀၀ ရှိသောမိသားစု ဖြစ်၍ တိုတောင်းသောအတုကမ်းခြေသို့သွားရန် ... သူတို့တစ်နေ့တာအတွက်သွားရန်ဆန္ဒရှိလျှင်လျော့နည်းသည်။ Valecia ..
ကျွန်တော်ထင်တာကတော့မတန်တဆစျေးကြီးနေသည်၊ ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်ယူရို ၁၀ ခန့်နှင့်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်မှတ်ချက် ၁၂ ခုဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအရာသည်ကောင်းသည့်ရေကန်တစ်စုံသို့သွားပြီးတစ်ဝက်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောပေးဆပ်ခြင်းကို ပို၍ ကောင်းသည်။ ထို့အပြင်ဆားငန်ရေအတွက်မူစွန့်စားခန်းတစ်ခုအတွက်ပင်လယ်သို့တိုက်ရိုက်သွားပြီးမနက်ခင်းတွင်ထွက်ခွာပြီးညအချိန်တွင်ပြန်သွားသည်ကပိုကောင်းသည်။ အနည်းဆုံးယူရို ၆၀ လောက်အကုန်အကျခံပါတယ်။
သင်နေထိုင်သူမဟုတ်လျှင်ကြီးမားသောမိသားစုများ၊ သို့မဟုတ်မသန်မစွမ်းသူများအတွက်အထူးလျှော့စျေးမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကြီးမားသောမိသားစုခေါင်းစဉ်နှင့်မသန်စွမ်းမှုကဒ်သည်စပိန်နယ်မြေတစ်လျှောက်လုံးတန်ဖိုးရှိပါကကျွန်ုပ်သည်ပြောပါလား၊ သူတို့စပိန် hahaha မဟုတ်ကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်!
ငါအရမ်းကောင်းတယ်ထင်တယ်၊ မင်းမှာကားမရှိဘူးဆိုရင်မင်းကကားနဲ့မပြီးရင်အပူအအေးနဲ့ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်။ မတန်ဘူး၊ စျေးကအရမ်းမများဘူး။ , ဒီပဲရစ်မဟုတ်ပါဘူး, အိုင်တီ MADRID ၏အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့မည်သည့်ရေကန်၌ကောင်းသောဖြစ်ပျက်
မနေ့ကငါတို့သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဝင်ပေါက်က ၁၂.၇၅ ဖြစ်ပြီး၊ အခန်းဝသည်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ အလွန်သန့်ရှင်းသည်။ ရေကန်သည်ကြီးမားပြီးရေပန်းဥယျာဉ်တွင်ဆလိုက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပျော်စရာကောင်းသည်မှာသေချာသည်၊ ကမ်းခြေဘားတစ်ခုလည်းတတ်နိုင်သည်။ နှင့်အမျိုးမျိုး။ ကျိန်းသေကောင်းတစ် ဦး အတှေ့အကွုံ။
ငါ) rma က de Vides ဟုသူကပြောသည်
ငါပြန်ပြောပါ) rma de Vides
Marisa guzber ဟုသူကပြောသည်
အပြင်ဘက်ကလာတဲ့သူတွေကိုတက်ဖို့ဘာကြောင့်ကုန်ကျရတာလဲကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ မြို့ကြီးများနှင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများကိုမည်သူမဆိုလာရောက်လည်ပတ်ကြပြီးမည်သည့်နေရာမှမဆိုခရီးသွားများအတွက်ဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိပါ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဆိုးဝါးပုံရတယ်၊ ငါတို့တွေအားလုံးအတူတူပဲ၊ ဘယ်ကလာကြတာလဲ၊ စပိန်လူမျိုးအားလုံးကတန်းတူညီမျှမှုတောင်းဆိုတာဘယ်မှာလဲ။
Marisa guzber အားပြန်ပြောပါ